Tababarka A soconaysa — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Dhamaadka dhacdo kasta marka ciyaartoyda guul ka taagnaa podiums guusha ee, la qoslayay wejigooda iyo bilado ku nasanayso on sanaaduuq ay, waxay gurto faa'iidooyinka ay tababarka. Laakiin sida ay samayso Kitaabka Quduuska ah, waxaa jira nooc ka mid ah ka xoogbadan, tababar-ma, sababtoo ah tababarka jirka waa wax aan waxtar lahayn, laakiin sababta oo ah waxa uu ku koobnayn.
Haddii aad weligaa yaabay waxa Ilaah u maleeyo ku saabsan rabtay aad, halkan jawaabta ay: Wuxu qabaa, waxa ay leedahay faa'iido, laakiin la xadidin, qiimaha. Sidaas halka aad socda, samaynayaan dhoollatus, iyo kor u miisaanno, nastaan ​​in aqoonta in ay tahay wax wanaagsan in la sameeyo. jirkaaga ILAALI qaab ciyaareed fiican waa wax loo bogo-xitaa xigmad leh laakiin waxa uu u socday oo kaliya in ay ilaa iyo haatan waxaad ka heli.
Tani waa waxa Rasuul Bawlos ku yidhi Timothy:
"Laakiin waxba kuma laha sheekooyin aan ixtiraamin iyo doqon ah leeyihiin. Halkii, naftaada tababar cibaado, tababarka jidhka ayaa lacagta kooban, laakiin cibaadadu waa faa'iido si kasta, tan iyo markii ay ka haya ballanka nolosha xaadirka ah iyo sidoo kale nolosha inuu yimaado." (1 Timothy 4:7-8)
Waxaan xisaabo karin ilaa fikirrada Paul ee ka shaqeeya sida this: tababarka jirka waa wanaagsan, laakiin tababarka xagga ruuxa waa ka sii wanaagsan. Iyo in sababta oo ah xoog jirka waa ku meel gaar ah, halka cibaadadu waa weligeed ah. Marka Paul waxa uu ka hadlayaa "tababar iyo cibaadada" Waxaan qabaa inuu ka dhigan tahay samaynayaan wixii idin ruuxa ka xoog. Waxaa loola jeedaa ku lug yeeshay hawlo ka dhigi aad wax dheeraad ah cibaado leh. Waxaa laga yaabaa in kor u our Kitaabka Quduuska ah waa xitaa ka yar suurad ka qaadeen miisaan, laakiin waxa ay dayaceen la micno tahay inaan seego in ka badan caafimaad wanaagsan.
Weligaaba waa ka wanaagsan yahay daqiiqad
Waxaynu wada ognahay in marka ay wax sii jiro waa ka badan la jecel yahay. mid ka mid No iibsaday gaari og waxa bisha soo socda dumin doonaa. Waxaan halkii iibsan lahaa wax socdaa halka a, maxaa yeelay, waxaynu heli doonaa in ka badan oo ka mid ah maal-. Laakiin haddii aynu nahay si loo xisaabiyaa iyadoo go'aanada ku saabsan baabuurta, intee ka badan ayaa loo xisaabinayaa waana in aan ku saabsan naftayada?
Imisa jeer ayaad u malaynaysaa ku saabsan daa'in? Runta waxa ay tahay, waa in aan u malaynayaa in ka badan oo ku saabsan aannu ku samayn lahayn. Waxaa su'aal ma in kulli inteenna weligiis wuu noolaan doonaa; su'aashu waxay tahay waxa in weligiis noqon doonaa sida. Sidaas daraaddeed waa in aan ka dhigi maalgelinta hadda, garanaya in cawaaqibka ma dhammaan doonaan.
Tani waa waxa aan saamayn maalinba maalinta ka dambaysa ay diiradda saaraan. Sports way wanaagsan yihiin, laakiinse iyagu ma ay tahay wax walba oo. Your xoog jirka laga yaabaa in aad ka heli kulliyadda galay, laakiin ma waxaad ka heli doontaa galay Jannada. Waa in aad is ogow fiican ee jirkaaga, laakiin waxaan leenahay wax cuslaa si ay u daryeelaan. Sidee caafimaad leh waa adiga naftaadee?
Sida loo tabobaro
Ilaah inoo siinaysaa in la dhiso "muruqa ruuxi ah" marka aan sii daayeen dembiga Korka qabtay Ciise. Markaasuu wuxuu noo soo diro si ay jimicsiga. Waxa uu si raxmad leh ina siiyey eraygiisa, dadka uu, iyo xataa dhegtiisa. Sidaas daraaddeed aynu ka akhrisan, wehelnimo, oo Ilaah u barya. Athletes tababar adag sababtoo ah waxay doonayaan in loo diyaar garoobo kulanka ama ciyaarta ka hor iyaga ka mid ah. Waxay rabaan in ay awoodaan in ay u tartamaan si heer sare.
All oo naga mid ah wajihi doonaan baaritaano ruuxiga ah, tijaabooyin, iyo dagaalo maalin kasta. Ma waxaad u darbay? Dhameystay uma shaqeeyo ciyaartoyda iyo waxa aan ka shaqayn doonaa Masiixiyiinta. Sanadkii la soo dhaafay ayaa reading Kitaabka Quduuska ah ma ku filan tahay inay ku quudiso sanadkan. Waxaan ka dhigi doonaa oo kaliya iyada oo loo marayo marathon this by nimcada Ilaah ee, laakiin waxa uu inoo diyaarinaya tartanka iyada oo jimicsi ruuxiga ah our.
Waa waxtar ii ah in la xusuusto in halka faa'iidooyinka tababar jireed waxaa ay ku koobnaanayaan, faa'iidooyinka tababarka ruuxa aan xad lahayn. Maalmaha kuwa markaan Ma dareemayo inaan tukada ama wax akhriska Ereyga Ilaah, Aniga qudhaydu waxaan xusuusin karaa in lacagta ma uu yar yahay ama ku meel gaar ah. Ma i caawin doona oo kaliya todobaadka soo socda, waxaa i caawin doona in nolosha ee soo socda. Taasi dhiirogelin aan u baahdo oo dhan.
Theodora • March 11, 2014 at 10:40 waxaan ahay • Reply
Tani si dhab ah ii barakeeyey…!!!Mahadsanid!!& Ilaah ha idiin barakeeyo….waad ku mahadsan tahay jidaynayey sayidkii in aad isticmaasho.
Matt Smethurst • March 11, 2014 at 10:42 waxaan ahay • Reply
Thanks for eraygan wanaagsan, Trip.
Daniel DryIce Reyes • March 11, 2014 at 10:44 waxaan ahay • Reply
Trip mahadsanid for this. Waayo, toddobaadkii la soo dhaafay aan lagu kuman ah digtooni geeri. Anigu garan maayo sababta, laakiin waxaan sameeyaa. runtii waxaan loo baahan yahay in la is xasuusiyo in samada waa waxa ugu wanaagsan weligiis iyo dhulka this ma ii heli doonaan wax.
vizlyf in • March 11, 2014 at 10:47 waxaan ahay • Reply
Tani waa mid laga cabsado! TOD Thanks! Waxaad neef xayawaan ah!
GregBrown • March 11, 2014 at 11:06 waxaan ahay • Reply
Thanks for xoogaa this dhiirin! Waa ay fududahay in qaar ka mid ah oo naga mid ah si ay u noqdaan umushu la cunaya caafimaad iyo jimicsi. Laakiin ha waqti dheeraad ah, waxaad ku Bixisaan qorsheynta cunto aad iyo jimicsiga, ka badan in times of salaadda iyo daraasadda of Ereyga? Waa ay fududahay in ay leeyihiin mudnaanta aad isku dhexyaacsan, xataa garoonka howlgalka.
Barako in Masiixa oo dhan!
anigu waxaan oggolahay. The taam / jimicsi xagga ruuxa waa FAR ka muhiimsan yahay wax kasta oo jirka taam / jimicsi, laakiin waxaan sidoo kale aaminsanahay in labada waxaa la samayn karaa waqti isku mid ah iyo sidoo kale. Waan ogahay waxaa jira line a ganaax u dhexeeya shaqaynayn naftaada iyo shaqaynayn waayo, Ilaah, laakiin waxaa jira farqi (rumaysanina ama ma). Shaqaynayn waayo, Ilaah, jidh ahaan, waxaa ka mid ah waxyaabaha ruuxiga ah. Tusaale ahaan, marka aad hesho jaal tababarka a, aad laba hadal xilliyo aad marka tababarka wada. Bal qiyaas haddii, marka aad laba hadal, ma aha oo ku saabsan bamka ah, murqahaaga, iwm. Halkii, marka aad la hadleyso, qalbigaaga ka hadlo, iyo Wehelnimo ayaynu la mid kale oo ku jira Masiix. shaqada jirka ka baxay waxaa laga yaabaa in danta guud ee kuwa jimicsiga, laakiin haddii aad ku dari dhinaca ruuxi ah, aad taam la go si heer unearthly (xaq halkaas oo aanu la rejeynayaa in uu noqdo), faafo jacaylka Masiixa. Kolosay 3:17
Waxaa i amazes sida Rabbigu wuxuu ku hadlaa siyaabo badan oo kala duwan. Waxaan la hardamayo maleeyeen “waa in aan ka shaqeeyaan ayaa maanta” laakiin dareemayey sida aan ugu aagga this ka badan iyo in ka badan mar kale ku guuldareystaan ​​iyo xoogaa dareensaneyn sidaas waa laydin baabbi'in kartaa waqti haddii aanay wax joogto ah ee noloshayda. Akhrinta blog this waxaa waanada xagga Ilaah inuu>Aniga iyo markii aan diiradda isaga iyo ruux tababar, Waxaan dareemayaa si aad u wanaagsan oo ku kalsoon in waxa la joogaa wakhtigii aan gabayo. Waxaan u malaynayaa in caafimaad waa muhiim, laakiin waan ogahay in qodaya galay eraygiisa, oo isaga doonaya waa sidoo qiimihiisu labaad kasta oo nolosha. Waqtiga la Ilaah waa marna ayaan. Thanks for lagu addeeci waxa Masiixa idiinku yeedhay si ay u wadaagaan. Taas waxaan u baahan yahay. Ilaah Adiga iyo Trip qoyska barakeeyo!
Absolutely, labaad kasta waa u qalantaa. Ku faraxsanahay in aad la dhiirigelinayaa laga yaabaa!
Bro alaabtii Good
Rabbigu • March 11, 2014 at 3:18 pm • Reply
hey safarka, ummm hooba byitself qoto dheer xiiso
Man this waa walax laga cabsado, Waan jeclahay waxa aad u istaagaan. Waan jeclahay barashada ka waxbaristiisa aad ee music iyo hadda buugga “Life The Good”.
Ku faraxsanahay in aad la dhiirigelinayaa laga yaabaa. Oo waxaan rajaynayaa buugga waxay noqon kartaa mid waxtar kuu siyaabo badan!
Tani waxa ay ahayd mid laga cabsado. Labada wax Waxaan rajeynayaa in ay helaan iyo hayn sanadkan oo weli waan la mid ah in uu yahay meel fog ka muhiimsan midka kale ku dhibtoon. Trip Thanks, aad blogs waqtigii ay ahayd mid aad u Waxyoon, oo ay si joogto ah dib ii farta Xiddiga.
Tee-wiil • March 11, 2014 at 5:16 pm • Reply
Bro waxanu waa wixii aan u baahnaa. Waxaan la dhibtoonaya iyo ruuxa ku dagaalamaya labada maalmood ee ugu dambeeyay. Just halmaamay inuu ku tukado,, akhriya bible, iyo xataa kaniisadda aadaa. Tani waa toosiyaan call a. Hadda ka dib waxaan ahay nin is beddelay in Masiix. Waxaan rumaysnaa in Ilaah n dheer i dhegaysan, maxaa yeelay nolosheyda aan cibaadada lahayn. Ciise wuxuu u dhintay iskutallaabta dusheeda, aniga iyo waan ogahay waxaan mar walba soo dhawaynaynaa in uu joogitaanka oo uu waxa xaqa ah oo aamin ah iga Ii Dhaafo Gafafkayga.
Bro aan Ilaah u ah nolosha iyo shuqulkii weynaa uu uu kugu sameeyo iyada oo mahad. Ilaahay ha idin barakeeyo, waayo, shuqulladiisa aqbalayaan.
Joog walaalkay u duceeyey.
Tilmaan fiican u qaaday! Mahadsanid! = o)
barakeeyey iyo gasha this. Trip Thanks!
Liam • March 12, 2014 at 12:00 waxaan ahay • Reply
Turaanturoon posts aad mar kasta i gaadho waqti kaamil ah. Ka dhig daynin Ilaah shaqeeyaan saaxiibkay aad marayo
Joshua Galvin • March 12, 2014 at 2:18 waxaan ahay • Reply
Dhab ahaantii loo baahan yahay Bro this. Thanks for dhiirigelinta.
Mistry • March 12, 2014 at 3:28 waxaan ahay • Reply
Safarka struff deeeeep, ma wax aan inta badan ka hadlaan. Fadlan, sii posts aad soo socda.
Tirso • March 13, 2014 at 12:26 pm • Reply
Tanu waa nolosha inaan anigu ahay naftayda qabsado in si, Ilaah ammaan y Trip!!
Xuquuqda on walaalkiis waqtiga. Mahadsanid! Ilaah ha idiin barakeeyo!
Aamiin. Waad ku mahadsan tahay fariin this diraya. Waxaan dhamaanteen u baahan tahay. Ilaah mahad.
E_Jay • March 24, 2014 at 2:09 waxaan ahay • Reply
Ilaahay ha idin barakeeyo, waayo, taasu.. Waan ku baryayaaye, waxaad ka heli dhiirogelin iyo dhiirigelin wakhtiga yur baahida… Aamiin
Stuff Good. aayadda Great.
Sulaymaan • March 26, 2014 at 6:55 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay, Aaminnimadayduna inay Socdaalkii Sayidka. Waxaan qabaa in aad u baahan tahay si ay u qoraan buug labaad.
LoganLong • April 1, 2014 at 11:45 waxaan ahay • Reply
Waxaan qabaa in ay tani tahay mid aad u khuseyso in dhaqanka maanta. Imisa jeer ayaad ku aragtaa dadka jimicsiga saacado? Trip, Waxaan ka shaqeeya YMCA iyo waxaan arkaa qof maalin la mid ah oo maantaan ugu yaraan saacad ah u shaqaynayn, laakiin guud ahaan in ka badan in. Oo helo aad ku fekereyso, laga yaabaa in ay jiraan wax badan oo ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah in soo dhex galay Y (Waxaan nahay ugu weyn ee Indiana), sidaa darteed sida kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayaa ku isticmaala 1-2 saacadood maalintii naftooda ku hawlanaa hawlaha ruuxiga ah? Tani waa ku haboon ii sababtoo ah waa call ka soo baxay ayaan loo baahan yahay in dib qaab aad u hesho jidh ahaan iyo ruux ahaan. Waad ku mahadsan tahay walaalkiis.
Ilaah ha barakeeyo,
Marjorie • April 2, 2014 at 12:20 waxaan ahay • Reply
Aamiin, mahad Quraanka!
Oritsegbemi • April 17, 2014 at 6:39 waxaan ahay • Reply
Kanu waa eraygii a on time! Ilaah ha barakeeyo!
Josh • April 26, 2014 at 4:38 waxaan ahay • Reply
Tani waa eray-for-a-xilli. In dhaqanka, waxaa jira cadaadis badan oo bulshada si fiican iyo guys in ay taam iyo 'buff', waxaan ka heli kartaa si dhexda u galay waxa aan qabaa inaan waa in sida, ee waxa ay dadka kale noo sheeg waxaan u baahanahay inaan u eg.
Oo wuxuu ku yidhi in Ilaah u maleeyo in rabtay ayaa qiimaha ku koobnayn waa kaalinta on, marka la barbar dhigo daa'in aan qarashgareyn kartaa Ilaah la.
Tani waxay I xasuusinaysaa sheeko Daa'uud markii la subkay inaad ahaato boqor u soo dhiibay Samuu'eel 1 Samuel 16). Ilaah ayaa sheegay in aayadda 7, “Dad eegaya muuqashada dusha, Laakiinse Rabbigu eegaa qalbiyada.”
ha idiin barakeeyo,
MannyRuiz • Laga yaabaa 17, 2014 at 2:05 waxaan ahay • Reply
Trip runtii yididiilo! Wax kasta oo i helo oo u dhaw in Ilaah run ii keentaa farxad iyo ii xoogee! Sidaas mahadsanid nin. runtii waxaan idinku mahad. Oo anna waxaan xajin doonaa inaannu idiin soo ducayno :)
Liam • June 21, 2014 at 10:27 waxaan ahay • Reply
Trip waxaan ahay weyn galay shaqaynayn, laakiin waa inaan isa soo xusuusiyo in uu akhriyo this post kasta hal mar, halka a. Wuxuu ka caawiyaa igu dhawro diirada ku saabsan waxa run ahaantii arrimaha
Brian • July 4, 2014 at 9:33 waxaan ahay • Reply
Wow sida blogger walaalahooda ah waan jeclahay content of this. Anigu waxaan ahay buff tababarka, laakiin ay timaado badan ka sahlan mararka qaarkood helo waqti aad u soo qaado aan Word maalin kasta. ka dibna Waxaan la yaabanahay sababta aan waxaan u istaagaan tijaabooyin aadan sida waa in aan. waanada Awesome. Trip Thanks
gnocchi • July 21, 2014 at 6:22 pm • Reply
Tani waa run ahaantii ah dhiirigelinta iyo waxa ay ahayd wax ay ahayd on maskaxdayda. Anigu ma akhriya maalin kasta Bible aadan, dhab ahaan, Haddaba waan tegi karo 2 ama 3 maalmood oo aan la xiriiri Ereyga Ilaah…laakiin hadda waan ogahay in aan naftayda diido dheefaha weligeed ah. Waxaa loola jeedaa wax badan ii sheegay in waxa aan akhriyey maanta i caawin doona todobaadka soo socda ama bisha soo socota. Waxaan kuma tiirsanaan karo wixii aan ku sameeyey sanadkii la soo dhaafay, ama toddobaadkii la soo dhaafay…Waxaan u shaqaynayn, waayo, daa'in!!
Cibaadadu uu qiimo DHAMAAN WAXYAABAHA haysta yabooha labada nolosha Adduunyo ee dhaw iyo nolosha ay yimaadaan!
Trip Thanks Lee, waayo, Ilaah daynin shaqada aad loo marayo…Imma dheeraad ah ka akhriyi Ereyga! :)
Jacaylka this post! Waan jeclahay jimicsiga & Ilaah waan jeclahay, laakiin waan ogahay in taam ruuxiga ah waa aniga waxaan xiiseynayaa.
in uu ahaa Trip fariinta laga cabsado, Waxaan mar walba la yaabay in shaqaynayn waa khalad ama aan ama si fudud aan loo baahnayn. Your falanqaynta baaba'o hawada ka mid ah in. Thanx, sii BRAGING Bro!!